Dhegayso Spotify music la premium Spotify
Dhegayso Spotify Music la Spotify Premium
Qaybta 1: Waa maxay lacagta caymiska Spotify?
Qeybta 2: Sida loo helo premium Spotify
Download music Spotify free la TunesGo oo maqla oo aan premium Spotify
Qeybta 1: Waa maxay Spotify Premium?
Tallaabada 3. syncing
Spotify waa Platform Music ugu wanaagsan ee Lovers music dunida oo dhan ka. Spotify wuxuu kuu ogol yahay dhegeysiga ka mid ah music ah oo dhan qaybaha oo ku jira mid ka mid ah loo ururin ugu weyn ee music adduunka. Iyadoo Options heeso ciyaaro, qaybsiga playlists , dhagaysto heesaha online iyo offline , Spotify waxay bixisaa ee ku caashaqay music adduunka oo dhan madal ugu fiican. Spotify yimaado saddex qaybood kaas oo noqon kara Free, raad iyo Premium in loogu yeedho sida saxda ah. Iyadoo qaar ka mid ah xadeyn ku saabsan version xorta ah Spotify, version Premium ee Spotify, waxay bixisaa mid ka mid ah ururinta ugu fiican ee ka mid ah muuqaalada dhan tartanka oo dhan dunida dacaladeeda.
Spotify Premium bixisaa xayeysiiska songs free dhagaysto fursadaha in dadka isticmaala iyo bixiyaa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee audio madal ee foomka of 320 kbps. Sidaas darteed, tayada sare ee songs la xayeysiis ma yahay muuqda ee premium Spotify. Iyadoo qaababka badan, kuwaas oo la xidhiidha Premium Spotify ah, fursadaha sida offline dhagaysiga muusigga waa mid iyaga ka mid ah. Ururinta ugu badan ayaa heesaha oo kaliya waa muujinta kale ee la xidhiidha Spotify iyo qoraalkii ay.
Faa'iidooyinka Spotify Premium
Iyadoo Spotify Premium, waxaad xaq u leedahay in ay isticmaalaan Spotify inuu u ciyaaro song kasta oo aad rabto iyo marka aad rabto. Sidaas darteed, waxaad dalban kartaa wax daqiiqad kasta oo waqti. Waxa kale oo aad fursad u heli iyo maqli playlists, ama in la ogaado music cusub. Xitaa in aad abuuri karaan iyo edit playlists oo ay leeyihiin awood ay ku wadaagaan music iyo playlists. Iyadoo Spotify Premium, Waxaad dhegaysan kartaa Gurtida gaaray by feature Spotify Radio. Xayaysiisyada No yihiin waxa aad ka heli leh Premium Spotify ah. Xitaa, iyadoo telefoonnada gacanta aad tahay xaq in faa'iidooyinka la mid ah sida kor ku xusan.
Faraqa u dhexeeya Spotify Premium iyo Spotify Free
Spotify ayaa ku soo beegmay ugu horayn in laba qeybood oo, mid lacag la'aan ah, halka kale sida caymiska, ay leedahay wax ay is barbar on kasta oo kale. Iyadoo xisaabta lacag la'aan ah, aad tahay qof xaq u abuuraya playlists kuu gaar ah oo kaliya oo ay leedahay xarunta inuu isku shaandheyn ku kasta oo playlists ama fanaaniinta buugga. Iyadoo kooxda heysata account premium waa xaq in wax walba, oo Spotify bixisaa. Iyadoo xisaabta lacag la'aan ah, aad leedahay inuu qaado niyad xayeysiis waafaqsan dhisayaa ilaa halka dhagaysiga muusigga, halka aad jannada ku jira iyo iyadoo xisaabta lacagta caymiska ee Spotify. Faraq kale oo weyn oo u dhexeeya labada waa in la version xorta ah ee Spotify, waxaad ma ay maqli karaan si music offline, halka premium ogolaan xarunta offline music la dhageysto isticmaala.
Faraq kale oo muhiim ah, marka ay timaado in ay is barbar tayada audio, version free bixisaa tayada maqal ah oo kaliya 192 kbps, halka marka aan ka hadlo version premium ee Spotify, heerka qayb ka mid ah 320 kbps yahay dalab.
Waa maxay qiimaha Spotify? Ma premium Spotify u qalantaa?
Spotify waa codsiga, kaas oo ka yimaadaa oo lacag la'aan ah oo ah qiimaha kuwa aadan rabin in aad ku qaataan xitaa haba yaratee hal iyo kuwa doonaya inay sahamiyaan ama muuqaalada dhamaystiran, fursadaha caymiska waxaa laga heli karaa. Sidaas darteed, labada qeybood oo ay ku jiraan dalab la Spotify ah. Premium Spotify ayaa ku soo beegmaysa qiimaha 9.99 doolar bishiiba. Marka aad akhriyi qiimaha this, qaar ka mid ah ayaa ku bilaaban doona fikirka 'in bixinta noocan oo kale ah waa istaahilaa?'. Ee ah kuwa, waxaan dhihi karaa in muuqaalada taasoo la iman premium Spotify waa weyn iyo xorriyad buuxda halka adiga oo isticmaaleya isticmaale music adduunka, go'aanka in ay bixiyaan ilaa 9.99 doolar ugu fiicnaan doontaa.
Lacag La'aanta ah ee isku day? Spotify premium ardayga? Iyo qaababka kale oo badan
Waxaa jira oo keliya version kale, taas oo la odhan karaa waa sida version maxkamadda, taas oo raad ah ee 30-ka maalmood ee qiimaha waxba. Iyada oo aan wax kharash ku lug, aad arrin ka abaalmarinayn muuqaalada iyo dhammaan faa'iidooyinka account premium muddo 30 maalmood ah inta badan dalalka. Si kastaba ha ahaatee, waddamada qaarkood, muddada ay tani tahay 60 maalmood. Iyadoo qaar ka mid ah shuruudaha iyo xaaladaha inuu ka faa'ideysto xarunta sida, oo ah qaab Users kuwaas oo heshiiska adeega Premium ama Unlimited ama kuwaas oo qaatay tijaabo ah oo aysan u qalmin dalab this ', fursadaha la qaadi karo ay kuwa soo xulay oo keliya.
Premium Spotify waxay bixisaa qaar ka mid ah ka-dhimis loogu talagalay ardayda. Xilligan la joogo ku dhawaad ​​50% ardayda, fursadaha ee ardayda waa mid ka mid ah uu nool yahay. Waxaa iyaga u ogolaanaya in ay iyaga ka fogaada xayeysiis looga xumaado oo ay helaan qaababka dhamaystiran oo Spotify.
Hagaha si maxkamad loo saaro Spotify free
Spotify raad lacag la'aan ah lagu tarin karaa website-ka rasmiga ah ee Spotify. Dhammaan tyou u baahan tahay in sleect fursadaha of version free of Spotify oo aad u baahan tahay inaad iska diiwaangeliso adigoo gelaya dhammaan faahfaahinta loo baahan yahay.
Hagaha u Spotify premium for free
Si inuu ka faa'ideysto muuqaalada caymiska for free, waxaad u baahan tahay oo dhan waa inay tagaan website-ka rasmiga ah iyo dooran version tijaabo ah fursadaha premium. By diiwaan fursadaha, waxaa la siiyey amar inuu ka faa'ideysto ka muuqaalada premium Spotify ee qiimaha waxba ka jirtay bishii kowaad waxaa aad.
Hagaha u premium Spotify ee ardayga
Wixii account Premium Spotify, user loogu tala galay waa in ay noqdaan arday iyo ardayda website link noqon kartaa https://www.spotify.com/uk/student/ .
Hagaha u premium Spotify qoyska
Spotify Qoyska kaliya waa version cusub ee Spotify, kaas oo u ogolaanaya qoyska dhamaystiran inuu ka faa'ideysto adeegyada lacagta caymiska. Oo qof walba oo dheeraad ah, waxaad fursad u haysataa in lagu badbaadiyo 50% ka mid ah lacagta xubin kasta oo dheeri ah. Iyadoo Spotify Premium xisaabiyo qoyska, adiga iyo qoyskaaga leeyihiin fursadaha ku raaxaysan playlists gaar ah iyo xubin iyo faa'iidooyinka kale oo dhowr ah oo la xidhiidha xisaabaha Premium.
Sida loo Torrent A Movie
Goobaha Best Halkee aad kala bixi karto Christian Music Si fudud
Sida loo Download CD 102.5 Music
> Resource > Music > Dhagayso Spotify Music la Spotify Premium